Mgbasa mgbasa ozi agbanweela site na akwụkwọ akụkọ redio ọdịnala na akwụkwọ na netwọkụ telivishọn dị ugbu a na ngosipụta ọkụ ọkachamara n'ime ụlọ / n'èzí. Eachinled na-aga n'ihu ịmụ ihe ọhụrụ, emeela nke ya na ụlọ ọrụ ngosi. Anyị na-anọgide na-agbasa ahịa mba ofesi, ma na-emekọrịta mmekọrịta dị ogologo oge na ọtụtụ ndị ahịa mba dị iche iche gburugburu ụwa.
Ihe oru ohuru anyi bu nke ndi ahia ochie nke Cyprus, oru ngo a bu 20.736mx2.304m P3 Curved LED display, Nkọwapụta dị ka ndị a: mbastar SMD2121 oriọna ojii, 5124IC, ọkọnọ Meanwell, ike LVP7000 vidiyo processor.
Mgbe ha wụnye ha, ha chọpụtara na nsogbu ụfọdụ ebilila, ọ na-esiri ha ike idozi, anyị kpebiri ozugbo izipu injinia anyị ka ọ nyere aka, Na mbọ anyị na-agba, ihe niile zuru oke iji mezue. Nke a abụghị iwu mbụ anyị maka nke a ụlọ ọrụ, ha jupụta na ọrụ anyị na ngwaahịa anyị, Anyị gara n'ihu na-arụkọ ọrụ ọnụ ruo ọtụtụ afọ.Hope anyị nwere ike ịrụkọ ọrụ ọzọ n'ọdịnihu dị nso ma nwee mmepe azụmaahịa na Cyprus na mpaghara ndị ọzọ.
Eachinled anọwo na-aga n'okporo ụzọ ụwa iji weta ezigbo ngwọta kacha mma, ebee ka ịnọ? edima nsan̄a nnyịn!